SomaliNet Magazine: MEEY 2002
Qaybtii koowaad waxaan soo aragnay in danbiga danbiyada ugu weyn uu yahay shirkiga. Qaybtii Labaadna waxaan soo aragnay in danbiga labaad uu yahay in uu qofku qof kale dilo
Danbiga 3aad: Sixirka
Sixirku wuxuu ka mid yahay danbiyada ugu waawey
AQOON KORORSI - SAACADDA DIB LOO CELIYO AMA LA HORMARIYO IYO MICNAHA KU JIRA
Taariikhdu markay ahayd April 07,2002, saacadduna ay ahayd 1:59 A.M ayaa dad badan oo Maraykan ah saacadahooda horay u dhigeen hal saac oo ay ka dhigeen 3:00 A.M. Sidoo kale waxaa saacadohooda horay u dhiga bisha March axadda ugu dambaysa waddammo badan oo Yurub ku yaal. Caadadaan ayaa waxaa dadka M
DHAQANKA - FADHIYADA GOLAYAASHA
Inkasta oo dadka uu khuseeyo xeerka lama dilaanka ah ay ka badan yihiin inta aanu ka soo hadalnay, misana intaas ayaan kaga gaabsaneynaa Dhaqanka biri- mageydada aanan lagu xad-gudbin ee ku xusan xeerka xoolo-dhaqatadeena. Raadka laga garan karo dhaqanka noocaas ah wuxuu ka muuqdaa tixdii uu tiriye
FANKA IYO SUUGAANTA - GABAY: DHIBAATADA MUSLIMIINTA HAYSATA
Gabaygaan waxaa tiriyey Isxaaq Cali Diiriye 16 april 2002. Isagoo kaga hadlaya dhibta muslimiinta haysata meelkasta oo ay joogaan iyo inay iyagu sababeen markay Islaamka ku dhaqankiisii ka tageen, isaga oo Ilaahay ka baryaya inuu gaalada Muslinka isu bahaysatay rogo, islaamkana quweeyo.
FANKA IYO SUUGAANTA - ALLA QIIMO BADANAA
"Waligeed aduunyada waqtigaa qof saacida qofna waayahaa xira, labadaan waxaan ahayn horaa looga waayoo waa nin iyo waagii?.." . Eraydaan halaasiga ah waxay ka soo burqnanayeen Rikoor ag yiil Muna oo iyana heestaa qiimaha badan ee Amina Cabdullahi ku luqaynayso ay hadba beyd la meerinaysay.
FANKA IYO SUUGAANTA - SHEEKO TAXANE AH: ALLA MA IYADII BAA ALLA MA ISAGII BAA?
Qaybtii Koowaad - Ahmed waxa uu ku dhashay tuulo la yiraahdo Qoolcaday oo Hargaysa u jirta 10km, maalin ay qoraxdu soo jeedo oo dharaar cad ah. Sannadkii 1960 kii. Waxa uu Ahmed ku barbaaray Tuuladaa oo uu ariga ku raaci jiray.
Ahmed waalidkii aad ayay faqri u ahaayeen hase yeeshee cunto xum
TAARIIKHDA - DAGAALKII SOOMAALIYA IYO ETHIOPIA(1977) - QAAB DHISMEEDKII DOWLADDII XHKS
Intii ka dambeysay dhismahii xisbiga hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed \_"X.H.K.S\_" dhismaha dowladdii soomaaliyeed waxaa ay u dhisnayd sidatan :
I) Madaxtooyada Jamhuuriyadda oo ka koobnayd:
a- Guddoomiyaha golaha wasiirada.
ARRIMAHA BULSHADA - DHACDO RUN AH: QABIIL AYAA DUMIYAY QOYSKAYGII!
Waxaa ay aheyd in uu aad ii soo jiitay hanaankii iyo habsamdii uu sharxayey nolosha taalla qurbaha waxaaba uu i geliyey jacayl xad dhaaf ah oo aan u qaaday qurbaha, anoo awlaba niyadda ka jeclaa kuna fekeri jiray sidaan u aadi lahaa meel ka mid ah Yurub.
Habeenkaa indho isma saarin oo w
MAXAA KU CUSUB MAGAZINE-KA?: WAYDIIN IYO WARCELIN
Waxaan dareensanahay in ay jirto baahi weyn oo dad badan oo Soomaaliyeed u qabaan sidii ay u heli lahaayeen jawaabta saxda ah ee su?aalaha ay qabaan oo la xiriira diinta. Sababta ugu weyn in qofku waayo cid su?aashiisa uga jawaabta waa iyada oo dadkii k
CAYAARAHA - QUBANE
Yaa marti-galin doona tartammada ciyaareed ee Somali National week 2002?
Sida dad badani oo aad u xiiseeyaa ciyaaraha ay la socdaan,waxaa saddexdii sannadood aynu ka soo gudubnay lagu qabtay magaalada Minneapolis iyo nawaaxigeedaba tartammo ciyaareed oo aad u xiiso badnaa kuwaas oo lagu x
DIINTA - SU’AALIHII UGU YAABKA BADNAA EE LA WAYDIIYAY SHIIKH CABDULLAHI AL-NUURI IYO JAWAABOHOODII.
3-dii qaybood oo hore waxaan la soconay qisadii labadii nin oo dilay wiilkii yaraa oo ay abtiga u ahaayeen kaddib markii ay arkeen in uu madow yahay ayna ka baqeen in ceebi uga timaado. Gabadhii 18 jirka ahayd oo jeclaatay ninka 60 jirka ahaa kaddibna diidday in ay nin kale guurs
SIYAASADA - MARAYKNKU DHEXDHEXAAD MA KA YAHAY XAALADDA BARIGA DHEXE?
Konton sano ka hor ayaa Maraykanku ballan qaaday inuu taageeri doono Israa?il. Sannadkii tagay ee 2001da Israa?il waxaa ay noqotay waddanka koowaad oo la siiyo deeqda ugu badan ee Maraykanku bixiyo, waxaana uu dhaqaalahaan saddex jeer ka badnaa inta uu Maraykanku siiyo Masar oo ah waddanka labaad e
FANKA IYO SUUGAANTA - SKEEKO TAXANE AH: KULANKII BARAKAYSNAA
Qaybihii hore waxaan la soconay Ayaan iyo Faysal oo akhbaar kala helay, kaddib markii ay in badan kala maqnaayeen. Ayaan oo Australia ku nool wadaad ah, xaas ah, hooyo ah, nin wadaad ahina qabo, nolosha ay ku nooshahay aan ku faraxsanayn. Faysal oo USA ku nool, balwad yeeshay. La
CAYAARAHA - BARNAAMIJKA XIDIGAHA: NUURADIIN CALI SACIID
Iyada oo aynaan qoraalladeena ku soo koobi karin xiddigihii faraha badnaa ee u kacay qaranka Soomaaliyeed ayaanu misana isku dayi doonaa inaan marba soo qaadano ciyaaryahannada ay inoo suuro-gasho inaanu helno taariikhahoodii isboorti muddadii ay ku dhex jireen bulshada isboorti